Usoro ịwụ ịwụ: musts atọ maka njem ụmụ agbọghọ kacha nke Seychelles
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Usoro ịwụ ịwụ: musts atọ maka njem ụmụ agbọghọ kacha nke Seychelles
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Njem Girlsmụ nwanyị Seychelles
Ibu ọrụ kwa ụbọchị abụghị nanị na ọ na-agwụ ike kamakwa ọ na-agwụ ike ma na-ekewapụ mmadụ iche. Nke a bụ ihe kpatara nzere ji dị oke mkpa.
Soro umuaka ndi a bia dika ha mejuputara ihe ndi ịwụ ma nwee ọ aụ njem ụmụ agbọghọ gaa Seychelles mara mma.
Igosiputa agwaetiti bu ihe doro anya na agwaetiti a di egwu ma di egwu.
Kedu njem ị ga-ezu ma ọ bụrụ na ịpịghị nri na nri dị ụtọ - na ị gaghị eme onwe gị?
Inga, Sheila, Ifat, na Ela lara ezumike nká na ndụ ha na-enye nsogbu, rịtuo na ụgbọ elu na-aga Seychelles iji nweta ahụmịhe, n'ebe dị anya site na igwe mmadụ na-ekwo ekwo, gịnị ga-abụrịrị njem kacha mma ụmụ agbọghọ ha nwere!
Quartet ahụ hiwere isi n’otu njem ha na-eche n’àgwàetiti ahụ, na-elekwasị anya n’àgwàetiti Mahé, Praslin na Ste. Anne. Ha nwere oke obi uto na njem nke isi agwaetiti nke Mahé, na-enyocha ma na-ese foto na gburugburu ebe a ma ama na omenala na gburugburu obodo Victoria. Ha nwere ọmarịcha echiche dị egwu sitere na Mission Lodge, anwụghị na ihe osise Britain nke Marianne North, na-ele anya na ndịda n'ofe Mahé, ma jiri mmasị nyochaa Seychelles 'UNESCO World Heritage Site na Praslin ihe ịtụnanya Vallée de Mai, ụlọ nke coco dị ịtụnanya- de-mer nut, na ịwụkwasị n’anwụ ebe anwụ na-acha ntụ ntụ dị nro n’agwaetiti ndị ahụ.
Ndụmọdụ anyị: Seychelles agwaetiti mejupụtara agwaetiti 115, nke ọ bụla nwere ọmarịcha mma ha, atụmatụ pụrụ iche, na ịchọghị ịhapụ otu n'ime ha ka ị na-agagharị n'agwaetiti ndị ahụ n'ụgbọ ala agbazite ma ọ bụ na obere ọdụ ụgbọ njem na-egosi gị na ụmụ agbọghọ gị ga-ahụ ntụpọ Island hopping bụ anya kwesịrị, ma site n'ikuku ma ọ bụ ụgbọ mmiri; mee atụmatụ njem gị site n'aka onye ọrụ mpaghara nwere ikike maka njem raara onwe ya nye.
Anyị na-akwado ụbọchị ụmụ agbọghọ, na-eji oke osimiri na-adọrọ adọrọ nke na-edekarị ndepụta nke 'zuru oke n'ụwa', dịka Anse Lazio na Praslin Island ma ọ bụ ọbụlagodi La Digue's Anse Source D'Argent, nke a na-ekwe nkwa ọnyà ya. ezinụlọ gị na ndị enyi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na anyaụfụ. Maka ndị hụrụ okike na ụfọdụ mmega ahụ, anyị na-atụ aro ụzọ ndị mara mma gburugburu agwaetiti ahụ; ọtụtụ na-emeghe maka vistas pụtara ìhè - na ndị na-eduzi akwụkwọ ikike ikikere maara nke ọma na mpaghara mpaghara. Boatgbọ njem njem ụgbọ mmiri gaa Ste. Anne Marine Park iji nwee mmasị na ụdị mmiri dị ịtụnanya bụ ihe dị mkpa; gaa njem gaa ebe nsọ ndị agwaetiti dịka Curieuse ma ọ bụ Cousin maka imikpu na usoro nchekwa nchekwa. Maka ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu, dọrọ ogologo oge na Bird Island, ebe naanị otu ìgwè mmadụ ị ga-enweta bụ mmiri ozuzo na-abanye na akwu n'etiti May na Ọktọba, nde ndị ha enweghị ike ịbụ ihe ọjọọ!
Kpoo onwe gi
Na-eme ihe kachasị nke ha escapade iji kwụnye batrị ha, ụmụ agbọghọ ahụ lekwasịrị anya na njem nlọghachi mgbe ha nọ na Seychelles; izu ike n'akụkụ mmiri na ọdọ mmiri bụ akụkụ kachasị mma nke oge nwa agbọghọ ha.
Ndụmọdụ anyị: Seychelles nwere plethora nke osisi spa; wepụta oge ịhọrọ nke ga-adabara gị mma! A sị ka e kwuwe, ihe kachasị mkpa n'oge nwa agbọghọ na ezumike bụ oge na-egbu oge, ọ dịghị ihe dị mma karịa ụbọchị spa na ụmụ mmadụ kachasị amasị gị. N'ịbụ ndị ehichapụrụ site na ụfọdụ ngwaahịa ndị mepụtara na mpaghara, ịhịa aka na ihe ndị sitere n'okike dị ka citronella, aki oyibo ma ọ bụ ọbụna vanilla ga-ewepụ ike ọgwụgwụ na nsogbu nke ụdị ndụ a na-adịghị agbanwe agbanwe. Wepụta oge gị na ụmụ gị nwanyị iji gaa njem ntụgharị na mkpogharị nke uche, ahụ na mkpụrụ obi.
Kpoo uto onu ahia
Mgbe ha nọ n'agwaetiti ndị ahụ, ụmụ nwanyị Israel anọ ahụ gara njem nri na-atọ ụtọ, na-eme ka uto ha dị ụtọ na ụtọ pụrụ iche nke nri creole, ama ama maka ngwakọta zuru oke nke ahịhịa na ngwa nri.
Ndụmọdụ anyị: O yikarịrị ka ọ bụ otu n'ime isi njem gị, nri nri bụ n'ezie ite na-agbaze nke ọdịbendị nke na-esite na ngwakọta nke nri Europe nwere mmetụta sitere na ndị si India na China kwabata. N'ebe a, ị ga-anụ ụtọ ụtọ nke curries, azụ a mịrị amị nke anụ ọhụrụ dị n'oké osimiri, na gratins ejiri azụ ọhụrụ jidere. Ewezuga nri dị mma, ị ga-agarịrị ebe ị na-aga ebe ndị Seychellois na-aga, n'ihi ya, gị onwe gị kwa nwere ike ịnụ ụtọ nri dị mma, nri ọdịnala na ọnụ ahịa mara mma, na Ogwe mpaghara na ọgba aghara n'akụkụ osimiri maka mmanya kachasị mma na ndụ gị!